iminyaka 2 4 Sekwedlule amaviki #56 by ferdiwi
hi ingabe ikhona adaptha ukushintsha joestick kusukela 15 kancane USB adaptha .Ngiye Microsoft ohlangothini nakuWinder futhi ephelele ngakho i ngempela okudingeka ukwazi ikhona isixazululo ukuthi i wazama omunye USB joestick kodwa sibonga awowonke
iminyaka 2 4 Sekwedlule amaviki #57 by rikoooo
Ngicabanga lokhu kufanele ikusebenzele https://www.amazon.com/GamePort-Converter-Adapter-Joysticks-Controller-Steering/dp/B00FDOBVZG
iminyaka 2 4 Sekwedlule amaviki #58 by rikoooo
Iphutha lami, kubonakala kungekho adaptha ehambisana nezinhlelo ze- Microsoft Sidewinder, ukuthi kufanele kube induku yokudlala ethile
iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki - iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki #76 by Gh0stRider203
(NAWO ukuhlela njengoba Akufani ukuthanda eBay izixhumanisi ...)
Kusukela lokho Ngifundile ku kulolu chungechunge, njengoba nje ubuhlungu Me .... wena ONGASE uyogcina ukuthenga induku entsha lonke
Ngokwami, Ngingaluleka le Saitek X45. Nakuba-ke IS oludala imodeli Stick & mpintsha, bengilokhu uyisebenzisa iminyaka eminingi ngiyithanda ke. Kuyiqiniso ukuthi iningi ezindizayo wami kwenziwa jumbos, Ngithole kuhle nje mayelana nanoma yisiphi uhlobo izindiza. Ufanele amaningi izinkinobho ungakwazi programmer futhi ukushintsha hat eziningana (okuvumela ngisho ngaphansi ikhibhodi ukusetshenziswa). - 1st isixhumanisi
Eshibhe engiyithole ku amazon kwaba $ 89.99 + $ 7.49 lokuthumela. Ebay kwaba LOTI kancane at $ 24.99, + $ 10.shipping kodwa ngeke efakwe ohlwini kuqhubeke isikhathi eside. Lokhu omunye Nokho kuyinto induku kuphela & mpintsha. Ayikho manual, akukho disk. - Ebay lento 322399578359
I BAKHALA uthole eyodwa kwaba kancane at $ 55 ku eBay ukuthi ine konke. Mpintsha, induku, manual (okuyinto angizange ngikwazi btw lol), futhi i-CD ngoba. (3rd isixhumanisi) oh futhi khulula lokuthumela. - Ebay Into 222389050446
Ngiyethemba ukuthi lokhu kuyasiza futhi Ngiyaxolisa okuso lokhu!